EkoTürkတီဗီမှ Serhat Ulueren က “Sergen Yalçın၏ coronavirus စမ်းသပ်မှုသည်အပြုသဘောဆောင်ပြီးသည်နှင့်Beşiktaşကိုရွှေ့ဆိုင်းရန်တောင်းဆိုမှုရခဲ့သလား” ဟုပြောသည် Nihat Özdemirက“ Beşiktaşကိုရွှေ့ဆိုင်းရန်တောင်းဆိုခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ သူတို့က ‘Sergen အိမ်မှာရှိနေပါပြီ၊ ကျွန်မတို့ရဲ့ဆရာ Murat နဲ့ဆက်လုပ်ပါမယ်။ ‘ သူတို့က Trabzon ကဲ့သို့အလွန်အရေးကြီးသည့်နေရာရွှေ့ပြောင်းမှုမှ 3-1 အောင်ပွဲဖြင့်သူတို့ပြန်လာခဲ့ကြတာပါ “ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
နီဟတ်Özdemirက “ဆာဂျင်ယယ်လ်လင်းကိုကျော်ပြီးသွားပါမယ်။ ငါဘရှစ်ကတ်သ်တ Mr.းMr. iebi ထံမှသင်ယူသည်။ သူမှာရောဂါလက္ခဏာမရှိဘူး။ အိမ်မှာ ၁၅ ရက်ကြာထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီ။ နောက်ထပ်ပွဲတစ်ခုကသူ့အသင်းတာဝန်ခံတော့မဟုတ်ဘူး။ နောက်မှဖြစ်လိမ့်မယ်။ ” ရှင်းပြချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
RESTBET501 SERGEN YALÇIN SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK? TFF AÇIKLADI BETBABA138 SERGEN YALÇIN SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK? TFF AÇIKLADI RESTBET501 SERGEN YALÇIN SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK? TFF AÇIKLADI SUPERTOTOBET0120 SERGEN YALÇIN SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK? TFF AÇIKLADI SULTANBET561 SERGEN YALÇIN SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK? TFF AÇIKLADI SUPERTOTOBET0121 FALCAO NE ZAMAN SAHALARA DÖNÜYOR? SUPERBAHİS630 FALCAO NE ZAMAN SAHALARA DÖNÜYOR? SUPERBAHİS630 SERGEN YALÇIN İKİ İSMİN BİLETİNİ KESTİ BETPAS423 FALCAO NE ZAMAN SAHALARA DÖNÜYOR? SULTANBET561 SERGEN YALÇIN İKİ İSMİN BİLETİNİ KESTİ
7 Comments on BETBABA100 SERGEN YALÇIN SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK? TFF AÇIKLADI
KAAN December 1, 2020 at 7:10 pm
GÜVENÇ December 1, 2020 at 11:40 pm
ATILGAN December 2, 2020 at 7:40 pm
YÜCEL December 3, 2020 at 12:30 pm
HASAN ULAŞ December 10, 2020 at 2:40 pm
KUBİLAY December 10, 2020 at 10:30 pm
ARDA December 14, 2020 at 9:20 am